Nhoroondo yekambani - China Zhenyuan Simbi Simbi Injiniya Inogadzira., Ltd.
China Zhenyuan Simbi Simbi Injiniya Inogadzira Co., Ltd.
China Zhenyuan Simbi Simbi Injiniya Inogadzira Co., Ltd. inyanzvi simbi mamiriro kontrakta inosanganisa dhizaini, kugadzira uye kumisikidza.
Iyo kambani yakavambwa muna Chikunguru 2006, yaimbozivikanwa seKunming Hongli Architectural Design Studio. Nekuwedzera kwebhizinesi re studio, zvishoma nezvishoma yakavandudza bhizinesi rayo mukuvaka saiti. Kubva 2015, zvishoma nezvishoma yakavandudza bhizinesi rayo kuita mainjiniya kuvaka uye yakachinjwa kuita simbi chivakwa mainjiniya kambani. Dhizaini, kugadzira uye kumisikidza minda yeKambani inosanganisira: mahotera, zvivakwa zvehofisi, inotonhorera, maindasitiri, dzimba, nhandare uye zvimwe zvivakwa. Dhipatimendi rehunyanzvi rakanyorwa senge dhipatimendi rekambani kubva payakagadzwa. Vanenge vanhu vatatu (kusanganisira munhu ari pamutemo) mune ino dhipatimendi vane makore 3-5 emakore ekugadzirwa dhizaini mune dhizaini dhizaini uye vese vane dhizaini dhizaini kumashure. Kwemakore anopfuura gumi, kambani yakagadzira chirongwa cheinosvika zviuru mazana masere2, uye kwemakore mashanu, iyo nzvimbo yekuvaka yave inenge 280,000m2.
Iyo kambani yagara yakaisa yakachengeteka kugadzirwa, mhando yeinjiniya uye kupedzisa zvinoenderana nenguva yekuvaka pakutanga. Mutengi-wekutanga ndiyo musimboti wekambani musimboti. Kugadzira mhando yeinjiniya ndiyo Hardware yekuvandudza musika. Ichitevera iyi pfungwa, kambani yakahwina rutsigiro rwakasimba uye kuzivikanwa kubva kuvanhu vane njere mumatanho ese ehupenyu.
Kubva pakagadzwa kambani iyi, mapurojekiti ekambani einjiniya ekuvaka uye rutsigiro rwehunyanzvi zvakapararira mudunhu rese uye Southeast Asia nyika. Tichifunga nezvekuvandudzwa kwenguva refu kwekambani, rutsigiro rwehunyanzvi uye kuvaka chirongwa, tichaita chirongwa chakatetepa chenharaunda uye kutsvaga kubatana pamwe nenyika dzese dziri padhuze ne "Belt neMugwagwa" senhare.
Mukurumbira wakanaka wekambani, hukuru hwemhando yeinjiniya uye sevhisi yepamusoro yakahwina rumbidzo yakawandisa kubva kumatunhu ese ehupenyu uye yakaumba yakanakisa mufananidzo wekambani.
Kugadzira base yekambani:
Simbi simbi ndiro uye chikamu simbi yekugadzirisa zvigadziko: Tianjin neYunnan, China
Nekuwedzera kwebhizinesi, China Zhenyuan Simbi Sisitimu Injiniya Inogadzira., Ltd. yave zvishoma nezvishoma ichipinda mukati mekuvaka munda. Mumakore matatu apfuura, iyo-saiti kuvaka chirongwa chave chinenge 90000 mativi emamita, uye yekunze dhizaini dhizaini uye dhizaini rutsigiro ingangoita 260000 mativi emamita.